Michelle MacLaren, Elisabeth Moss ary Daina Reid hitarika ny fizarana 8 rehetra amin'ny andiany Shining Girls ho an'ny Apple TV + | Avy amin'ny mac aho
Iray amin'ireo tetik'asa niasa Apple efa ho herintaona ny Shining Girls, andiany iray izay kintana amin'i Elishabeth Moss araka ny nampahafantarinay anao ny volana Jolay tamin'ny taon-dasa. Tao anatin'izay volana vitsivitsy izay dia nihanitatra ny mpilalao sarimihetsika niaraka tamin'i Wagner Moura sy Jamie Bell.
Na izany aza, mbola tsy fantatray hoe iza na iza no ho tompon'andraikitra amin'ny fitantanana an'io fientanentanana io. Ity fampahalalana ity dia navoakan'ny Variety. Raha ny voalazan'ity haino aman-jery ity dia nahita ihany i Apple tamin'ny farany izay ho tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ity fizarana voalohany ity izay misy fizarana 8: Michelle MacLaren, Elisabeth Moss ary Diana Reid.
Michlee MacLaren (Breaking Bad) dia manana ny heriny Emmy ary hitarika ireo fizarana 2 voalohany. I Elisabeth Moss dia manana loka Emmy ary loka ho an'ny mpilalao Actors noho ny heriny, hitarika ny fizarana fahatelo sy fahefatra raha i Diana Reid (The Handmaid's Tale) no notendrena ho Emmy, hitarika ireo fizarana 4 farany amin'ity andiany ity. Elisabeth Moss, ankoatry ny filalaovana tantara mitohy amin'ny fizarana andiany roa, dia mpanatontosa ihany koa izy.
Ny Shining Girl dia mifototra amin'ilay anarana nosoratan'i Lauren Beukes, izay manompo amin'ny famokarana mpanatanteraka miaraka amin'i Elizabeth Elizabeth Moss. Ity novela ity dia navoaka tamin'ny 2013 ary manaraka ny tantaran'i Kyrby (Elisabeth Moss) izay, rehefa tafavoaka tamin'ny fanafihana mahery setra izy, dia tompon'andraikitra amin'ny fanenjehana azy raha hitany fa tsy milamina ny zava-misy manodidina azy.
Wagner Moura (Narcos) dia milalao mpilalao antsoina hoe Dan, mpanao gazety tranainy iray izay manaraka ny tantaran'ny mpanafika mpaka tahaka amin'ny fomba malalaka. Jamie Bell dia hilalao ny anjara asan'i Harper, nofaritana ho toy ny manirery miafina izay mifandray amin'i Kirby amin'ny lafiny sasany.
Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy misy daty voatondro hanaovana ny premiere azy, fa raha ny filazan'ny Variety dia mety ho tonga amin'ny Apple TV + alohan'ny faran'ity taona ity, farafaharatsiny ny fizarana voalohany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Michelle MacLaren, Elisabeth Moss ary Daina Reid hitarika ny fizarana 8 amin'ny Shining Girls ho an'ny Apple TV +